Otu esi etinye nleba anya sistemụ nyocha na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye nlele Sistemu Glances na Ubuntu 20.04
July 13, 2021 June 10, 2021 by Jọshụa James
Olee otú Iji Jiri
Mkpu na nlele
Gbaa nlele na ihe nchọgharị weebụ
Gbaa ọnọdụ onye ahịa-ihe nkesa
Nyochaa Sistemụ Nlele bụ n'efu, ngwá ọrụ ahịrị iwu mepere emepe maka nlekota usoro, akụrụngwa sistemu dị ka CPU, Disk I/O, Sistemụ Faịlụ, Nkezi Ibu, Ebe nchekwa, Interfaces na usoro. A na-eji asụsụ Python arụ ile anya. Nlegharị anya na-akwado nleba anya n'ofe ikpo okwu, nke enwere ike iji ya na ntanetị dabere na webụ.
Otu n'ime njirimara mara mma Glances na-akwado bụ ikike ịtọ oke na mmemme. Ị nwere ike idobe nlezianya, ịdọ aka ná ntị na ihe dị egwu na faịlụ nhazi, nke ga-ebufe ozi na agba nke nwere ike igosi ọkwa maka nkwụsị nke akụrụngwa akụrụngwa, nsogbu akụrụngwa sistemụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Nlere anya, na ndabara, na-abịa na ndepụta agba agbagoro agbagoro, mana ị nwere ike gbanwee ma tinye nhazi ndị ọzọ.
Ọmụmaatụ nke nhazi njedebe nke Glances na-arụ ọrụ.
Ntuziaka dị n'okpuru ga-akọwapụta otu esi etinye Glances System Monitor maka sistemụ dabere na Ubuntu.
A ga-achọrịrị imezu ihe achọrọ sistemu ndị a tupu ịwụnye Nlebanya Sistemụ Glances.
Python> = 2.7 ma ọ bụ Python> = 3.4
psutil> = 5.3.0 (ka mma na ụdị ọhụrụ)
Ị ga-achọ ịnweta mgbọrọgwụ ma ọ bụ ohere sudo iji mezue nrụnye ahụ.
Nke mbụ, jide n'aka na sistemụ gị dị ọhụrụ site na ịpị iwu na-esonụ.
Wụnye Nyochaa Sistemụ Glances site na iji iwu dabara adaba sitere na ebe nchekwa Ubuntu.
Ọ bụrụ na etinyere Python-PIP3, ị nwere ike iwunye site na PIP.
Maka ụdị ochie, ị nwere ike ịwụnye PPA:arnaud-hartmann. A naghị atụ aro nke a maka ọtụtụ nrụnye.
Ozugbo i tinyechara mmemme ahụ, iji bulite ya, naanị ihe ị ga - eme bụ pịnye iwu ọnụ ọnụ.
Iji pụọ na mmemme Glances, ị nwere ike iji iwu a.
Ị nwere ike ịgbanwe nkeji oge nke mmelite Glance, ndabara bụ 1, mana ị nwere ike ịgbanwe nke a dịka ọmụmaatụ:
Ka iwelite iwu enyemaka, tinye ihe ndị a.
Dịka ekwuru na mmalite ntuziaka, Glances nwere agba maka ọkwa. Ihe na-esonụ na-akọwa ihe ha bụ.
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ: OK (mma)
Acha anụnụ anụnụ: Kpachara anya (nlebara anya)
VIOLET: ỊDỌ AKA NA NTỊ (ọmụma)
Uhie: OKWU (dị oke egwu)
Ọnụ ụzọ na ntọala ndabara bụ ndị a.
ịdọ aka ná ntị=70
Enwere ike ịgbanwe nhazi nke ndabara. Iji mee nke a, mepee ndezi ederede na faịlụ ahụ /etc/glances/glances.conf. Mana nke mbụ, ka anyị mee nkwado ndabere nke faịlụ nhazi mbụ maka nchekwa.
Na-esote, na-eji nano ederede editọ, mepee faịlụ nhazi isi:
Pịgharịa gaa na ala, ị ga-amalite ịhụ ntọala niile ị nwere ike ịgbanwe.
Iwu ndepụta ndị a ị nwere ike iji na Glances hazie, chọta ma gosi ihe ị na-achọ.
a – Hazie usoro na-akpaghị aka
c - Hazie usoro site na CPU%
m - Hazie usoro site na MEM%
p - Hazie usoro site na aha
i - Hazie usoro site na ọnụego I/O
d – Gosi/zoo stats I/O disk ols
f - Gosi / zoo usoro faịlụ statshddtemp
n – Gosi/zobe ọnụọgụ netwọkụ
s – Gosi/zoo stats sensọ
y – Gosi/zoo stats hddtemp
l - Gosi / zoo ndekọ
b - Bytes ma ọ bụ ibe n'ibe maka netwọk I/Oools
w – Hichapụ ndekọ ịdọ aka ná ntị
x – Hichapụ ịdọ aka ná ntị na ndekọ dị egwu
1 - CPU zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ kwa-CPU stats
h – Gosi/zoo ihuenyo enyemaka a
t – Lelee netwọk I/O dị ka ngwakọta
u – Lelee netwọk I/O na-achịkọta
q - Kwụsị (Esc na Ctrl-C na-arụkwa ọrụ)
Ị nwere ike nyochaa nlele na ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị gị. Awụnyere ndabere niile dị ka ndabara. Iji malite ọrụ ihe nchọgharị na mmemme ahụ, mee ihe ndị a.
Rịba ama na ị ga-ahụrịrị na ngosipụta ọnụ "Nleba anya interface onye ọrụ webụ malitere na http://0.0.0.0:61208" mgbe ị na-abanye iwu a. Nke a nwere ike ịdị ntakịrị mgbagwoju anya, ma ọ na-eji adreesị IP nke sava.
Ị nwere ike ịtọ paswọọdụ maka ihe nleba anya dabere na webụ site na ịpị iwu a.
Iji mepee ihe nchọgharị weebụ maka mmemme ahụ, jiri ọdụ ụgbọ mmiri 61209 nke ndabara tinye adreesị IP gị dị ka ọmụmaatụ.
Maka onye ahịa gị bụ isi, ị nwere ike idobe nlele na-aga n'azụ site na iji iwu a.
Ihe dị n'elu na-emepụta usoro ịgba ọsọ ndabere. Ugbu a ị ga-ajụrịrị ọnọdụ dị ugbu a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igbu ndị nhazi na ọnọdụ ndabere, pịnye ihe ndị a iji gbuo oge nlele niile na-arụ ọrụ.
Akụkụ ọzọ mara mma nke mmemme Glances bụ na ọ na-enye nhazi ihe nkesa ndị ahịa. Nke a pụtara na ị nwere ike ilele anya na ọtụtụ sava dịpụrụ adịpụ wee jikọọ ha na ndị ahịa gị mbụ. Sava niile ga-enwerịrị nlegharị anya arụnyere.
Nbanye na ihe nkesa dịpụrụ adịpụ, malite mmemme nlele na ọnọdụ n'akụkụ nkesa.
Mgbe ịmechara ịmalite nleba anya n'akụkụ ihe nkesa na sava niile achọrọ, gaa na sistemụ ndị ahịa gị wee jikọọ na adreesị IP sistemụ na-agba ọnọdụ sava-onye ahịa yana iwu a.
Nyochaa Sistemụ Nleba anya bụ nzọụkwụ dị elu karịa ndabara "n'elu" ngwugwu maka nlekota akụrụngwa sistemu na ndị nrụpụta nke na-ebu nrụnye Ubuntu ndabara. Ngwungwu a dị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha nke ọma nke sistemụ gị. Ọ na-ekpuchi ọtụtụ ozi ma wepụta ya na koodu agba iji gosi ozi na ihe data dị n'ihu gị pụtara yana otu o si emetụta ihe nkesa gị.
Uru agbakwunyere nke nlekota anya na-eme ka nke a bụrụ otu n'ime nhọrọ ndị a ma ama maka nlekota ihe nkesa dị mfe. Ọ na-aga n'ihu na-akawanye mma site na mmepe na-arụsi ọrụ ike na-aga n'ihu ruo taa.
Categories Ubuntu Tags Nyochaa Sistemụ Nlele, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi edozi ma hazie ọkụ ọkụ UFW na Debian 10 Buster
Otu esi etinye Flask na Ubuntu 20.04